Prilosec - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Prilosec
Generic Name: Prilosec Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Prilosec ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Prilosecကိုအစာမစားခင်(အစာမစားခင်အနည်းဆုံး၁နာရီအလို)မှာသောက်ပါ။ ဆေးညွှန်းမှာပါတဲ့ညွှန်ကြားချက်အားလုံးကိုလိုက်နာပါ။ ယခုဆေးကိုပမာဏတိုးသောက်ခြင်း၊လျှော့သောက်ခြင်းနဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ထက်ပိုသောက်ခြင်းများမပြုလုပ်ပါနဲ့။
ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်မပါဘဲဝယ်ယူလို့ရတဲ့Prilosec OTC ဆေးတွေကို၂၄နာရီကြာတစ်ကြိမ်နဲ့၁၄ရက်သောက်ရပါမယ်။ ဆေးကိုမနက်စာမစားခင်မနက်ခင်းမှာသောက်ပါ။ ဆေးအာနိသင်အပြည့်အဝရဖို့အတွက်၄ရက်လောက်ကြာနိုင်ပါတယ်။၂၄နာရီအတွင်းမှာဆေးပြားတစ်ပြားထက်ပိုမသောက်ပါနဲ့။
Prilosec OTC ဆေးကိုနောက်တစ်ကြိမ်၁၄ရက်ကြာမသောက်ခင်အနည်းဆုံး၄လလောက်ခြားပါ။ အဲဒီ၄လအတွင်းမှာသင့်မှာရောဂါလက္ခဏာအသစ်တွေပေါ်လာပြီးဆေးကုသမှုခံယူဖို့ိလိုအပ်ပါကဆရာဝန်ခေါ်ပါ။
ဆေးကိုမြန်မြန်မဖျက်ဆီးနိုင်အောင်အကာအကွယ်အုပ်ထားသောဆေးပြားသို့မဟုတ်Prilosec OTCဆေးပြားတွေကိုအမှုန့်မချေပါနဲ့။ ဝါးမစားပါနဲ့။ မချိုးဖဲ့ပါနဲ့။ ဆေးပြားတစ်ပြားလုံးသောက်ပါ။
ဆေးကိုမြန်မြန်မဖျက်ဆီးနိုင်အောင်အကာအကွယ်အုပ်ထားသောဆေးပြားကတ်ကိုဖွင့်ပြီးနောက်ဆေးသောက်ရပိုလွယ်ကူစေရန်ဆေးကိုပန်းသီးဖျော်ရည်တစ်ဇွန်းအပြည့်နဲ့လည်းတွဲသောက်နိုင်ပါတယ်။ ဆေးကိုမဝါးဘဲမျိုချပါ။ နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်သုံးဖို့အတွက်ဆိုပြီးမချန်ထားပါနဲ့။
Prilosecကိုအခန်းအပူချိန်မှာထားတာအကောင်းဆုံးပါ။ တိုက်ရိုက်နေရောင်ထိတွေ့နိုင်သောနေရာနှင့်စိုစွတ်နေတဲ့နေရာတွေကနေဝေးဝေးထားပါ။ ဆေးအာနိသင်မပျက်အောင်ဆေးကိုရေချိုးခန်းနဲ့ရေခဲသေတ္တာထဲကိုမထည့်ထားသင့်ပါ။Prilosecဆေးအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီးဆေးထိန်းသိမ်းဖို့လိုအပ်ချက်များလည်းကွာခြားနိုင်ပါတယ်။ ဆေးကိုသိမ်းဆည်းဖို့အတွက်ဆေးထုပ်ပေါ်မှာရှိတဲ့ညွှန်ကြားချက်များကိုဖတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုလည်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ ကလေးတွေနဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေဘေးကင်းဖို့အတွက်ဆေးကိုသူတို့နဲ့ဝေးရာမှာထားသင့်ပါတယ်။
Prilosecကိုအိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေဆေးချတာမျိုးကိုမလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါဒါမှမဟုတ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာစနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကိုစနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Prilosec အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Proton pumpတားဆေးတစ်မျုးဖြစ်တဲ့Prilosecဆေးကိုသောက်ခြင်းကြောင့်တင်ပါးဆုံရိုး၊လက်ကောက်ဝတ်ရိုးနဲ့ကျောရိုးမကြီးတို့အရိုးကျိုးနိုင်ချေမြင့်တက်စေနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီအခြေအနေဟာဆေးကိုပမာဏများများနဲ့အချိန်အကြာကြီးသောက်နေတဲ့သူတွေနဲ့အသက်၅၀နဲ့အထက်လူနာတွေမှာပိုပြီးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။Prilosecဟာအရိုးကျိုးနိုင်ချေမြင့်တက်ခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းအရင်းတစ်ခုလားဆိုတာကိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူး။
အချို့ရောဂါအခြေအနေတွေအတွက်Prilosecနဲ့ပိုးသတ်ဆေးတွေနှစ်မျိုးတွဲပြီးသုံးပါတယ်။ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတဲ့အတိုင်းဆေးအားလုံးကိုသောက်ပါ။ ဆေးတစ်ခုချင်းစီမှာပါတဲ့ဆေးသောက်ရန်အညွှန်းနဲ့လူနာလိုက်နာရန်အညွှန်းတွေကိုဖတ်ပါ။ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်မပါဘဲဆေးပမာဏတွေနဲ့ဆေးသောက်ရမယ့်အချိန်ဇယားတွေကိုမပြောင်းလဲပါနဲ့။
ယခုဆေးဟာသင်ဆေးစစ်မှုတွေလုပ်တဲ့အခါမှာပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ရလဒ်တွေထွက်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်ဆေးစစ်မှုတစ်ခုမပြုလုပ်ခင်မှာသင်ယခုဆေးသုံးခြင်းကိုခဏလောက်ရပ်ထားဖို့လိုပါတယ်။ သင့်ကိုဆေးကုနေတဲ့ဆရာဝန်ကိုသင်Prilosecဆေးသောက်နေတယ်ဆိုတာကိုပြောပြပါ။
သင်Prilosecဆေးကို၃နှစ်ထက်ပိုသုံးပါကသင့်မှာဗီတာမင်B 12ချို့တဲ့မှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သင့်မှာအဲရောဂါဖြစ်လာပါကဘယ်လိုလုပ်သင့်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာဝန်ကိုမေးမြန်းပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Prilosec ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
ယခုဆေးဝါးကိုကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နှင့်ကလေးနို့တိုက်နေချိန်တွင်အသုံးပြုလျှင်ဆိုးကျိုးများရှိမရှိကိုဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက်လုံလောက်သောလေ့လာစမ်းသပ်ချက်များမရှိပါ။ ဆေးမသောက်သုံးမီတွင်ဖြစ်နိုင်ချေကောင်းကျိုးများနှင့်ဆိုးကျိုးများအားလုံးကိုချိန်ဆနိုင်ရန်အတွက်သင့်ရဲ့ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။ အမေရိကန်နိုင်ငံအစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးစီမံကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့(FDA)ကPrilosecကိုကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်ဆိုးကျိုးရနိုင်ခြေအဆင့်Cလို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
Prilosec ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ဘယ်ဆေးတွေက Prilosec နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Prilosecကသင်လက်ရှိသောက်နေတဲ့အခြားဆေးတွေနဲ့ဓါတ်ပြုပြီးဆေးရဲ့ထိရောက်မှုနဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရနိုင်ခြေကိုပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကိုလုပ်ထားပြီး(စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊မညွှန်ကြားဘဲသောက်သုံးနေတာတွေ၊သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်)ဆရာဝန်ဒါမှမဟုတ်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုအမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကိုဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲသောက်သုံးခြင်း၊ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Prilosec နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Prilosec နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Prilosecဟာသင့်ရဲ့နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုပိုဆိုးသွားစေတာဒါမှမဟုတ်ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်သင့်ရဲ့လက်ရှိကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကိုသင့်ရဲ့ဆရာဝန်ဒါမှမဟုတ်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုအသိပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Prilosec ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Helicobacter pylori ပိုးဝင်ခြင်းအတွက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူသောက်ရန်ဆေးပမာဏ
ဆေး၂၀မီလီဂရမ်ကိုအစာမစားခင်သောက်ဆေးအဖြစ်တစ်နေ့တစ်ကြိမ်သောက်ပါ။ ရောဂါအခြေအနေတိုးတက်မှုနဲ့လူနာရဲ့ခံနိုင်ရည်ပေါ်မူတည်ပြီးဆေးပမာဏကိုတစ်နေ့လျှင်၄၀မီလီဂရမ်ရောက်တဲ့အထိတိုးနိုင်ပါတယ်။ လေ့လာချက်များအရအစာရေပြွန်ရောင်ခြင်းအတွက်၁၂လလောက်အထိဆေးပမာဏကိုဆက်ထိန်းထားဖို့လိုပါတယ်။
Gastroesophageal Reflux Diseaseအတွက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူသောက်ရန်ဆေးပမာဏ
Multiple Endocrine Adenomasရောဂါအတွက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူသောက်ရန်ဆေးပမာဏ
ကလေးတွေအတွက် Prilosec ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
GERDရောဂါအတွက်:တစ်ကြိမ်ကိုဆေး0.7mg/kgသောက်ခြင်းဟာအစာအိမ်နဲ့အစာရေပြွန်မှာရှိတဲ့pHကို၄အောက်လျော့နည်းစေပြီးစမ်းသပ်မှုတစ်ခုမှာတော့မွေးကင်းစကလေးဆယ်ယောက်[ပျမ်းမျှအသက် ၃၆.၁ပတ်(၃၄ပတ်မှ၄၀ပတ်)]မှာreflux တွေရတဲ့အကြိမ်ကိုလျှော့ချပေးပါတယ်။ တစ်နေ့ကို1မှ1.5mg/kgဆေးပမာဏသောက်ခြင်းကိုတော့စမ်းသပ်ဖို့တင်ပြထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးများမှာ Helicobacter pylori ရောဂါပိုးဝင်ခြင်းနဲ့တွဲနေတဲ့အူသိမ်ဦးပိုင်းအနာဖြစ်ခြင်းအတွက်ကုသခြင်း(ပိုးသတ်ဆေးတစ်မျိုးမျိုး clarithromycin သို့မဟုတ် clarithromycinနဲ့amoxicillinတွဲပေးခြင်း)
Gastroesophageal Reflux Diseaseအတွက်ကလေးသောက်ရန်ဆေးပမာဏ
Prilosecဆေးကိုသောက်ဖို့လွတ်သွားခဲ့ပါက(မေ့ခဲ့ပါက)သတိရတဲ့အချိန်မှာအမြန်ဆုံးသောက်ပါ။ သို့သော်လည်းနောက်တစ်ကြိမ်ဆေးသောက်ရမယ့်အချိန်နဲ့နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကိုကျော်ပြီးပုံမှန်အချိန်မှာပဲသောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကိုနှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ နိုဝင်ဘာ 26, 2018 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း မေ 20, 2019
Prilosec®. https://www.rxlist.com/prilosec-drug.html. Accessed November 13, 2017
အဖြစ်များတဲ့ ဗိုက်ထဲကဝေဒနာတွေနဲ့ အယူအဆအလွဲ (၅) ခု